Ogaden News Agency (ONA) – Wargayska –The Guardian – oo daaha ka rogay wixii la qarinayay
Wargayska –The Guardian – oo daaha ka rogay wixii la qarinayay
Maqaal aad u xiisa badan oo saxaafadda caalamka ay kala dafeen ayuu qoray Wargayska ka soo baxa dalka Ingriiska ee Guardian. Caalamka ma moogayn tacdiyada ka soo socda Ogadenya iyo dhibaatada aan la soo koobi karin ee loo gaystay shacabka Somaliyeed ee Ogadenya.
Hasa ahaatee, arinta ugu muhiimsan ee maqaalka wargayska uu ku soo kordhiyay gaar ahaan akhristaha u dhashay reer Ogadenya ma’aha dhibaatada ay maxaysatada Hawaarintu (Liyu boolis) ku hayaan dadka shacabka ah. Xogta la yaabka leh ee wargayska uu kashifay waa sida tooska ah ee dawladda Ingriiska ay uga qayb-qaadato una maal galiso tababarka maleesiyada loo yaqaano –Hawaarin- ama Liyuu booliska. Arintaa ayaa fadeexad ku ah dawladda Ingriiska una muujinaysa shacabka S.Ogadenya in dawladda Ingriiska ay weli qayb ka tahay dhibaatada loo gaysanyo shacabka Ogadenya iyadoon ogsoonahay inay tahay Boqortooyada Ingriiska midda u gacan galisay Ogadenya gumaysiga Abyssinia. Waxaa waajib ku ahaa Ingriiska marka la tixgalinayo akhlaaqda siyaasadeed inay ka difaacdo dhibaatada iyo xasuuqa ay Itobiya ku hayso dadka shacabka ah een waxba galabsan siduu dhigayay heshiisyadii ay kala saxiixdeen Odayaasha Somaliyeed ee Ogadenya iyo Boqortooyada Ingriiska. Hasa ahaatee inay Boqortooyada Ingriiska (the UK) ka qayb qaataan tababarka la sheegayo in la siiyo Hawaarinta iyagoo ogsoon xad-gudubka baahsan ee Itobiya ay ku hayso dadka shacabka ah (HRW Reports), waxay ceeb taariikhi ah ku tahay dawladda Ingriiska.
Waxaa intaaba ka daran magaca ay dawladda Ingriiska ugu yeedhay mashruucan lagu bixinayo lacagta tababarka oo ah – Security and Justice Component – Hawlaha Nabadgalyada iyo Cadaaladda -, iyadoo hadafka mashruuca ay ku sheegeen inuu yahay – in nabadgalya baahsan laga hirgaliyo gobolka Somalida (“to build a more peaceful and inclusive Somali region”). Ma odhan karno dawladda Ingriiska ma ogsoonayn dhibaatada ay maxaysatada Hawaarinta u gaystaan dadka shacabka ah (Maqaal). Mana odhan karno dawladda Ingriiska qayb ayay ka tahay dhibaatada lagu hayo shacabkanaga. Hasa ahaatee, waxaan xaq ugu leenahay dawladda Ingriiska inay hubiso ballanta ay ka qaadeen –canshuur bixiyayaasha shacabka Ingriiska- ee ku xusan mashruucan ee ah in lagu horumarinayo nabadgalyada, oo hab lagula xisaabtamo oo xirfadaysan leh ( .. with the goal of improving security, professionalism and accountability of the force .. ), taasoo sida ay xaqijiyeen haya’adaha xuquuqda aadanahana noqotay been aan jirin oo mashruucaa lagu maalgalinayay un laguna dhibaateeyay xuquuqul insaankii shacabkanaga ( .. but Human Rights Watch has documented countless allegations of human rights abuses.)
Baahi ninkii lahaa daba socdo ma lunto, xaq dadkii lahaa ay ku daba-joogaana lama duudsin karo. Cabdi Iley iyo kooxda uu horjoogaha ka yahay aduun iyo aakhiro midkii u horeeyay umbaa lagula xisaabtami.